Drip, Ntapu, Ntapu ... Zụrụ | Martech Zone
Ọ dịghị onye na-echere gị ọzọ tweet, ọnọdụ melite ma ọ bụ blog post ka ha ọzọ zụọ. Enwere ohere ọ bụla ị nwere ike ịkpali mmadụ ịzụta, mana ọ gaghị ekwe omume ịkọ mgbe atụmanya dị njikere ịme ihe ọzọ ha ga-azụ. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịnọ ebe ahụ mgbe ị na-atụ anya ya na- dị njikere ikpebi.
Ebee ka ha ga-anọ? Anyị ghọtara site na omume ịntanetị ugbu a na ihe ka ọtụtụ n'ime atụmanya ịntanetị ga-eji igwe nyocha. Kedu isi okwu ha ga-achọ? Ha ga-achọgharị na mpaghara maka nyocha ha? You nọ na nchọta njin ọchụchọ ebe ha na-achọ? Y’oburu na ha choo enyemaka n’ime netwok ha, ị bu ihe atukwasiri obi n’ebe ahu?
Gingde blọgụ bụ nnukwu ọrụ n'ịntanetị n'ihi na ọ na-enye gị ohere ịwụpụ ozi ma dịnụ mgbe ole olile anya na-achọ azịza ya. Ma ezughị ezu ịde blọgụ. Anyị na-eme ka ndị ọbịa anyị denye aha na nri anyị, denye aha na akwụkwọ akụkọ, soro anyị na Twitter, kwalite anyị na Facebook, ma ọ bụ jikọọ anyị na LinkedIn ka anyị wee nwee ohere ịnọ ebe ahụ mgbe ha dị njikere ịzụta.
Marketingre ahịa email bụ nnukwu ụzọ maka ijikọghachi ndị ahịa ahụ 'nwere ike' ịzụta n'oge na-adịghị anya. Ikekwe ha na-eme nyocha na ntanetị, chọta gị site na njin ọchụchọ, ma denye aha ha ka ha nwee ike lekwasị gị anya ma jikọọ mgbe ha dị njikere ịzụta.
Netwọk mmekọrịta bụ nnukwu ọrụ maka iwulite ikike na ntụkwasị obi, yana ikpughe 'azụmahịa gị' nye onye nwere ike ịme gị azụmahịa. Ọzọ, site n’ịnọgide na-anọ n’elu iru ebe ị nwere ike… ị ga-anọ ya mgbe ha kpebiri ịzụrụ.
Ihe ntanetị, ntanye na ntanetị, na mmelite mmelite ọ bụghị naanị na-eme ka uche gị dịrị, ọ na-esikwa n'aka ndị nọ na netwọkụ gị nye ndị nọ na netwọkụ nke ndị na-eso ụzọ gị, yana netwọkụ nke ndị na-eso ụzọ ha.
Dị elu nke uche na netwọkụ atụmanya anyị dị mkpa, iwulite ntụkwasị obi na ikike n'ime netwọkụ ha na-eme ka ohere anyị nwere ịkpọ ha mgbe ha dị njikere ịzụta. Ndị mmadụ na-ajụ mgbe ụfọdụ, m ga-etinye ego na Facebook ma ọ bụ Twitter? Ekwesịrị m itinye ego na azụmaahịa email ma ọ bụ njikarịcha njin ọchụchọ? Ekwesịrị m ịmalite blọọgụ ma ọ bụ kpọsaa na ntanetị?
Enweghị azịza ziri ezi na nke a. Ajụjụ a dabere na nloghachi na azụmaahịa gị. Ọ bụrụ na anyị na-ekere òkè kwa ọnwa na LinkedIn maka otu awa, ka anyị kwuo na oge awa ahụ ruru $ 250 na nyocha… nke ahụ bụ $ 3,000 kwa afọ. Ọ bụrụ na m nweta nkwekọrịta $ 25,000 site na ndu site na LinkedIn, ọ bara uru? N'ezie ọ bụ. Ajụjụ a abụghị ebe, Ajụjụ bụ kedu ka ị ga - esi kwado ma kposa mkpọsa ntapu na usoro ndị a niile nke ọma.
Etinyela nzọ na otu ụzọ, atụmanya gị nwere ike ịbụ ebe ọ bụla. Ozugbo ịchọtara ndị na-ajụ ase kachasị mma nke nwere ndu kachasị mma, ịnwere ike itinyekwu mgbalị na ndị na-ajụ mmụọ.
Drip, ntapu, ntapu… na chere maka izu.
Tags: oge ntanetịịde blọgụcontent Marketingụlọ ọrụ ịde blọgụntapuugborona-azụlite ya